မင်္ဂလာပွဲနေ့မတိုင်ခင် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ စိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ဖို့ပါပဲ။ တစ်ကိုယ်တော်ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးညကို မအိပ်ခင်မှာ အိပ်ရေး၀၀အိပ်ဖို့ ဘာလေးတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာ စစ်ကြည့်ပေးပါဦး။
1 . လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်တဲ့ ချည်သားအဝတ်
ပေါ့ပါးတဲ့ ချည်မျှင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အဝတ်အထည်လေးတွေက သင့်အသားအရေအတွက် ကောင်းမွန်သလို ညသန်းခေါင်အချိန်မှာ ချွှေးထွက်လွန်တာမျိုး မဖြစ်အောင်လည်း အသုံးဝင်ပါသေးတယ်။
2 . အဝတ်အစား ပွပွချောင်ချောင်များ
ကိုယ်နဲ့အတိအဝတ်အစားလေးတွေက ခနာကိုယ်ကို အချိုးအစားလှပပေါ်လွင်စေတယ်ဆိုပေမယ့် ညဘက်အိပ်တဲ့အခါမှာတော့ အိပ်ပျော်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပြင် ကိုယ်ခနာမှာ ရှိတဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုနဲ့ အသက်ရှူခြင်းကိုလည်း အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပြင် အဆိုးဆုံးကတော့ အိပ်ချိန်မှာ ကိုယ်ခနာက ဟော်မုန်းတွေချိန်ညှိပေးတဲ့ melatonin ဖွ့ံ့ဖြိုးမှုကိုလည်း ရပ်တံ့စေပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးညအိပ်ဝတ်စုံဂါဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ညအိပ်ဘောင်းဘီအတို ဖြစ်ဖြစ် ၊ အရှည်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေဆုံး ညအိပ်ဝင်စုံလေးကို ရွေးချယ်ပါ။
3 . Sleep Mask
ညဘက်အိပ်မပျော်မှာစိုးလို့ sleep mask လေးဝတ်ပြီးမှ အိပ်ဖို့ သတိရပါ။ အပြင်မီးတွေမှိတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အနားပေးပြီး အိပ်ပျော်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
4 . ပိုးပုဝါ
ချည်သားခေါင်းစွပ်လေးတွေဟာ ဆံပင်ကိုဆွဲထားသလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မင်္ဂလာပွဲနေ့မှာ ခေါင်းမလျှော်ထားဘူးဆိုရင်ပေါ့။ ဆံပင်က မလျှော်ဘဲနဲ့ပြင်တာက ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ လည်းဆိုကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဆံပင်ကိုပိုးပုဝါလေးနဲ့ချည်ပြီး အိပ်တာက ပိုက်ဆံကုန်လည်းသက်သာသလို ကိုယ့်အတွက်လည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။
5 . သန့်စင်ထားသောမျက်နှာ
အလှအပပညာရှင်တွေပြောနေကျ စကားလိုပဲ မိတ်ကပ်မဖျက်ဘဲ ဘယ်တော့မှအိပ်ယာမဝင်ပါနဲ့။မျက်နှာသစ်ပါ။ အစိုဓါတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ ခရင်မ်တစ်မျိုးမျိူးလိမ်းပါ။ မျက်နှာမှာ အမည်းစက်တွေ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဝက်ခြံပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေရင်တောင် ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နော်။ နက်ဖန်ပွဲအတွက် သည်းခံဖို့ပြောလိုက်ပါရစေ။